Kuyini ukwehlukana ngebhayisikili? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Ukuhamba ngebhayisikili okuhamba phambili - ungaxazulula kanjani
Ukuhamba ngebhayisikili okuhamba phambili - ungaxazulula kanjani
Kuyini ukwehlukana ngebhayisikili?
Ku-ibhayisikiliukugijima, aPhumaUchwepheshe umgibeli ogxile ekuhlaseleni lo mjaho zisuka nje ukuze abukise ngabaxhasi bakhe nokuzama inhlanhla yokuwina isiteji ngaphandle kokuthi alwe nayo yonke i-peloton entanjeni.
(Wush) - Akekho umshayeli owake angene eqenjini elihlubukayo bese ecabanga (ebubula) ukuthi lokhu kuzokwanela amahora amane noma amahlanu alandelayo size sinikeze abagijimi futhi bangajabula. Izikhathi eziningi kuphelela esigejaneni, kepha kwesinye isikhathi kuba nesasasa elikhulu. Futhi siyayithanda! Lapho labo abalwela ukungena ekhefini losuku bekwazi ukuhlala kude kuze kufike entanjeni.
Ngakho-ke sicabange ukuthi sizothatha isikhathi sokugubha futhi siqhakambise ezinye zezikhathi zokukhumbula ezikhumbulekayo nezinhle kakhulu zonyaka kuze kube manje. (Umculo we-elekthronikhi) Ekuqaleni kukaMashi, isigaba sokuqala seVolta Catalunya kufanele sibe ngesinye sabagijimi. Kepha uDe Gendt wayeneminye imibono.
Ekuqaleni wamshiya nabanye abashayeli abahlanu ngesikhathi sekhefu ekuseni, amakhilomitha angama-60 ukusuka ekugcineni konke kusemuva kwakhe, futhi usejwayele ukusebenza ngokuzimela kwama-watt angama-380. Abaqoqi. Ukusebenza kwakhe ngalolu suku bekunamandla kangangokuba ekugcineni weqe umugqa wokuqeda ngokushaya imizuzu emibili nemizuzwana engama-38 ngaphambi kukaMax Schachmann owayenguDe Gendt ngokukhazimula kwakhe okuhle, cabanga futhi, ngoba wayehlaba umxhwele ngokulinganayo eTour De EFrance.
Esigabeni sesishiyagalombili, wahamba ngokungenaphutha ekuqaleni kosuku lwamakhilomitha angama-200. Umuntu wokugcina owahlala naye kwakungu-Alessandro De Marchi. Kepha umNtaliyane akakwazanga ukuhambisana noDe Gendtas futhi, uqhubekile nokwakha amandla akhe ukuya egoli.
Yize abagibeli abahamba phambili emhlabeni begijima ngemuva kwakhe, uDe Gendt ukwazile ukumisa uTebo Pinot noJulian Alaphilippe ukufeza lokho okungaba ukunqoba okuhlaba umxhwele kakhulu kweCustomer yakhe asebeyitholile. (Umculo omnandi) Kuma-European Road Champions alo nyaka eNetherlands, imizila yabo ibiyisicaba. Isicaba ngempela.
Ngakho-ke besilindele iphathi yokulala engabikezela, uma sethembekile. Akunjalo! Kwabesifazane kwakuyi-hoolie ngokuphelele, njengoba besho eScotland. Kwakunomoya omkhulu; abanye babashayeli empeleni babeshaywe ngumoya lapho umoya ubuphephetha khona phakathi kwamabhilidi.
Ubalekile obukeka ehloniphekile ovela eDutch Amy Pieters, u-Elena Cecchini wase-Italy no-Lisa Klein wase-Germany bakhishwe. Kokubili uCecchini noPieters basebenza kahle ekukhahleleni inqwaba. Kepha amaDashi nawo abenoKirsten Wild, mhlawumbe ongomunye wabashayeli besizini eLorena Weibes, ezigabeni zabo.
Kepha abathengisayo bahlala becacile, uLisa Klein wahola ngokoqobo umshayeli wasendaweni ukusuka ebangeni elingamakhilomitha ambalwa. U-Amy Pieters ongalenzanga iphutha wakhipha uCecchini ukuze anqobe. Ungacabanga nje ukuthi bekuyokwenzekani uma ehlulwa neqembu elifana naleli, neqembu ngemuva? Igama elingukhiye umjaho wamadoda nozakwabo kaCecchini u-Elia Viviani, okuthe kulo nyaka kwelinye izinga.
Wakuthatha ngokusobala ukuhola ukushayela kukaCecchini futhi wazithola eseqenjini elihlubukile nozakwabo osheshayo uPascal Ackermann kanye neBelgian Yves Lampaert. Imvamisa umlingani weqembu likaDeceuninck Isinyathelo Esisheshayo, ubungabheja indlu yakho, imoto nezingane bekungumjaho omkhulu kodwa lokho akwenzekanga. Abathathu bahlala kude.
UViviani wahlasela wawisa u-Ackermann, kwase kuthi uLampaert angabi nalo ithuba lokumdlula ngophawundi ongaphezulu. UViv iani, iqhawe laseYurophu. (Umculo ophilayo) Uma sikhuluma ngezinhloso ze-epic, isigaba se-18 se-Giro D 'salo nyaka kufanele kube yi-Italia kusuka eValdaora / Olang kuya eSanta Maria Di Sala ukungena emlandweni ngenxa ye-epic yabo, ikakhulukazi ukwehla, isigaba eside wamakhilomitha angama-222 ngekhefu labesilisa abathathu, uNico Denz oqhamuka e-AGR2 La Mondiale, uMirco Maestri waseBardiani CSF noDamiano Cima oqhamuka eqenjini elincane laseNippo-Vini Fantini aqukethe amakhilomitha angama -320 ngaphambi kokuqeda, kanti basenemizuzu engaphezu kwemithathu ngaphambi gcina.
Kungaba ukuthinta-nokuhamba. EFlambrücke bekuyimizuzwana nje eyi-16. Abashayeli abathathu ngaphambili babenza okuthile okungalapheki.
UDenz ucwayize kuqala wabe esethatha umjaho we-sprint, i-peleton eno-Ackermann abahola phambili yavala futhi yavala ngokushesha, kepha ukuhlaselwa akufikanga futhi uCima wabanjwa ngumkhawulo omncane ukuthola ukunqoba kweqembu lokuqala nelokugcina eGiro D ' I-Italia. Yebo, muva nje ngoba kumenyezelwe ukuthi iqembu lizosonga ekupheleni kuka-2019. Ihlazo langempela, sidinga izindaba ezinjengalezi kwezemidlalo.
Ngenhlanhla yeCima, uthole ikhaya eGazprom-RusVelo ngo-2020! Noma okungenani cha. I-2019 ibingunyaka wezinsizwa futhi ayikho enye ngaphandle kweBelgian Remco Evenepoel. URemco wayezwana noToms Skujins eqenjini elihlubukile futhi njengamanje wayegibela umqansa wokugcina osuka eMurgil-Tontorra futhi ugcine isikhathi sakhe ngemuva kwezintandokazi zomjaho waze wayofika phezulu.
Ngemuva kokwenza ukwehla okungenasici futhi okungesabi. Wawela entanjeni cishe ngokungakholelwa kulokho ayesanda kukuzuza. (umculo omnandi) Siyamthanda uMarianne Vos.
Bangase benze i-athikili eyishumi ephezulu ezinikele kuphela ezikhathini zabo ezinhle kulo nyaka. Ukunqoba okuvelele kungukuwina kukaMarianne esiteji bedlala no-Askim ku-Tour of Norway. Emathangeni alandelayo simangele kancane ukuthi ubesevele ehlasela.
Ngaleso sikhathi kwakubukeka njengenye yezinyathelo eziqeqeshwe kahle zeNdebe Yomhlaba. Nge-donter denser, eholwa yi-Canyon SRAMs uLisa Klein, kwesinye sezimpawu zabo, imizamo yesilo sokwenza izinto ngozakwabo u-Alice Barnes, uBarnes uvale ngqo kulayini kodwa akwanele futhi uVos wangena esiteji. Kwakukhazimula ngokuphelele. (umculo omnandi) Isigaba se-19 seVuelta asilibaleki ngezindlela eziningi.
Okokuqala, uzokhumbula uMovistar futhi ngokukhohlwa umthetho ongabhaliwe wokuthi umuntu akahlaseli umholi jikelele uma esesemuva, kepha okwesibili ukunqoba kukaRemi Cavagna. Futhi, imithetho ejwayelekile ithi iBreakway kufanele ihlangane ngokuzikhandla ekuboniseni ukubumbana kuze kube yilapho ibanjwa amakhilomitha ayi-10 ukusuka ekugcineni noma ihlala kude ilwele impango phakathi kwabo. Akunjalo, Remi.
Ushayele amakhilomitha angama-25 ukusuka ekugcineni futhi wabamba insimu ngokuwina okudumile kanye nomncintiswano wakhe wokuqala weGrand Tour. Ucabanga ukuthi akusilo umthwalo wakhe. (Umculo okhuthazayo) Kusigaba 18 seTour De France yalo nyaka, ungasho ukuthi izinto azihambanga kahle ngokohlelo lweNairo Quintana imizuzu eyisishiyagalolunye nesigamu ku-GC enamamitha angaphezu kuka-5000 wokuphakama kulokhu Esiteji kusuka Esondela kuValloire, washibilika waqembuka eqembukweni elathatha cishe amakhilomitha angama-40 ukuwa ngemuva kokuqala kanzima.
Ube nenhlanhla yokuba nethalente elibi lokuqwala ezungeze, njengoNun, njengabalingani beqembu, kepha bekunguQuintana weminyaka edlule owemba umgodi wesilo osele namakhilomitha angaphezu kuka-16, okwakuwusuku lwezinsuku ezijabulisa kakhulu kulo nyaka ukuvakasha. UBernal uhlasele ngemuva futhi u-Alaphilippe wabeka enye yezintambo ezinhle kakhulu esake sazibona zihlala ziphuzi. Kodwa-ke, uQuintana weqe umugqa wokuqeda cishe ukusilela okufanayo aqala ukukhuphuka nakho.
Kube wukuwina okuqhakazile, yize kunakwe kakhulu indawo ebomvu esejezi lakhe, okuvele ukuthi bekuqhuma ijeli yamandla. (Upbeat music) Sifaka u-Annameik Van Vleuten kulo, u-A wokubalekela kwakhe ukunqoba, kepha futhi ngoba bekungumjaho wakhe wesibili kuphela ngemuva kokuphuka ithambo e-Innsbruck World Cup ka-2018. IStrade Bianche ngomunye wemijaho engiyithandayo yonyaka.
Futhi le nkanyezi kwakulula ukuyibona usendizeni enophephela emhlane. Akubanga yisikhathi eside, ubekhuphuka umqansa emikhakheni yesikhombisa yamatshe ayishumi nambili, kepha bekuyindlela nje ahamba ngayo. Indlela agibele ngayo uMarianne Vos ebhayisikilini lakhe.
Indlela ahlasela ngayo ukwenyuka kokugcina nge-Via Santa Caterina eya eSiena kwaba ukwakheka kwezinto ngo-2019. Futhi uma lokho bekuhlaba umxhwele, kuthiwani ngokugibela kwakhe emhlabeni? Umqhudelwano eHarrogate. Ukuhlasela kwabo lapho, mhlawumbe amakhilomitha ayi-110 ukusuka entanjeni yomqhudelwano womgwaqo womhlaba, kubukeka sengathi bazokwehluleka, ngokusho kwezitatimende zabo.
Mhlawumbe thina naye bekufanele sibe nokuzethemba okukhulu. Uwathathaphi emhlabeni la mandla? Mhlawumbe usaqaqanjelwa nguChloe Dygart Owenputting endlebeni eyodwa yesikhathi esifanele sokulingwa, ezinsukwini ezimbalwa ngaphambili ukuthatha umqhele kuye, kepha kusele amakhilomitha ayi-110! Usizi oluhle! Lapho ewela entanjeni ngemuva kwamahora kamuva, ukusabela kwabantu abaningi kwaba, izingalo ngemuva kokunikeza elinye lamakhefu ama-solo amahle kunawo wonke ake abonwa kumpetha yomjaho womgwaqo womhlaba. Insimu esele bekufanele ilande amathemba namaphupho abo aphukile emigwaqweni yaseYorkshire. (umculo omnandi) I-fall classic Paris Tours ibikade ingumlingisi we-sprinter omuhle kakhulu futhi ayikho eminingi kakhulu ngo-2018, ngokuthambekela ebhuqwini, abagqugquzeli manje sebenze umzila ogcwele ukukhwela kwemikhakha yegravel okokugcina Amakhilomitha angama-60 omjaho.
Oshicilelweni lwalo nyaka, uJelle Wallaysof Lotto Soudal, owanqoba lo mjaho emzileni wakudala ngo-2014, waya kozingela umpetha ovikelayo uSoren Kragh Andersenof Sunweb ngamakhilomitha angama-50. Ukuqhuma ngaphambi kwesikhathi kukaKragh Andersen ngesikhathi eseneMaven Neutral Service yenkampani kuphela ukuphela kwesitimela sakhe kanti uWallays wambuka lapho edlula. Ukujaha akukaze kubonakale kuhamba phambili.
Kube nokugqobhoza okungenakubalwa, kufaka phakathi ezintathu zikaStefan Kung nezimbili zikaNiki Terpstra, ogcine esuse i-AG2R La Mondiale Oliver Naesen nangemuva kweWallays, obegubha ukunqoba kwakhe okuwukuphela kwale sizini, ngebhayisikili ngemuva kwekhanda -Line celebration okwesibili indawo kufanele ifake uHugh Carthy kulolu hlu. Ukudlala kwakhe esigabeni sokugcina seTour de Suisse yalo nyaka bekuvelele. Uhambe yedwa, ebangeni nje elingamakhilomitha amahlanu ukuya emkhosini wezintaba ubude ongamakhilomitha ayi-100 futhi ngesibindi nangokuzimisela futhi mhlawumbe namandla angawakhi izinyembezi, uwine ngemizuzwana engama-22 nje kuphela ngaphambi kwendawo yesibili uRohan Dennis ekugcineni e-Ulrichen.
ahlala isikhathi esingakanani amaketanga amabhayisikili
Ngakho-ke lawa ngama-hits esiwathandayo okwahlukana nango-2019, kepha kunokunye okuningi kuwo kunalokho. Ngakho-ke unganqikazi ukwenza umusa wakho kule ndatshana noma intandokazi esigabeni sokuphawula ngezansi. Uma uyijabulele le ndatshana, sicela usinike isithupha ngokuchofoza isithonjana esingezansi kwalesi sihloko.
Uma ungathanda okuqukethwe okuningi okuhlobene nomjaho, nayi i-athikili engezansi ekhombisa ezinye zezinto eziyinqaba ezenziwa ngabagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe ekugijimeni.
I-peloton ibamba kanjani ukuhlukana?
TOiqembuukuhlukaniswa kube izingxenye ezincane kunamathuba amaningi okuthi ubone ukuphumelela kuphumelela. Uma kunomsila onamandla we-10km edlule lokhu kuzuzisa i-Phuma. Izinzuzo zokubhalwa phansi kwifayela le-iqembuincane lapho kunomoya osusa umsila. Imvamisa kungumoya onamandla obulala amathuba amancanePhuma.
Kungani i-peloton ivumela ukuhlukana?
Kunganiyenza ukuhlukanakwenzeke? Kunganiingabe i-peloton ivumelaamakhefu ukuze abaleke, ngalokho azibophezele ekuphishekeleni isikhathi eside? Mane ngoba kuyindlela eqinile kakhulu yokusuka ku-A uye ku-B. Ukujaha kaninginingi phansi konke ukuhlaselwa okwenzekayo kudala ithempeli elisheshayo elisheshayo elicoboshayo ngokomzimba nangokwengqondo.
Namuhla ngiseMid Wales futhi angizeli nje ukuzobuka indawo ebabazekayo, kepha kunalokho ngizohlangana nomnumzane owakha kabusha futhi acabange kabusha i-aerodynamics maqondana nomjaho womgwaqo nezilingo zesikhathi ngizokuthanda impela ngoba, thola lokhu, uze azivumele ukuthi azenzele isibambo sakhe eTaiwan. (imisindo ethambile kagesi) (umculo omnandi we-elekthronikhi) Kuhle, asihambe! Kumele ngithi lezi zibambo azifani nanoma yini engake ngayibona ngaphambili. Bangikhumbuza ngokungazi, angazi kanjani, ukuhamba ngezibambo ngoba banezinketho eziningi ezahlukahlukene ongabeka ngazo izandla noma okuthile.
Kepha empeleni akuzona ezokuhamba ngokukhululeka, angicabangi kanjalo. Lokhu ngokuqinisekile kungokwenzuzo encane ye-aero. Zinde impela, kufanele ngithi - la mabhayisikili amabili anesiqu esifushane.
Sinebhayisikili lokugijima lapha elinama-disc brakes, kepha njengoba ngishilo, izibambo ezindala ezindala. Futhi-ke kulokhu kuyisikhathi sesivivinyo sesikhathi, kepha sinemigoqo yomgwaqo kuso futhi. Sine-aero front drag.
Ngiyakuthanda lokho, kuhle impela. Futhi ngizokutshela ukuthi yini, lezi zingwijikhwebu, zimfishane impela. Yebo, ama-cranks angama-155 mil.
Angazi ngempela ukuthi ngithini ngalokhu, kepha ake sihlangane nomfana osemuva kwalo, uDavid. Ngakho-ke ngizozama ukumbuza imibuzo yakho. Ngoba ngicabanga ukuthi ngizocabanga ukuthi ucabangani kuDavid, kuhle, ngiyabonga kakhulu ngokungiyisa ngokoqobo.
Kepha asizile lapha ukuzokhuluma ngejografi. Wenzeni? - Well - Wonke umuntu uzobe ezibuza ukuthi.
Ubone isibhamu esihle. - Yebo. - Sitshele, khuluma nathi ngakho. - Yebo, ngoba yonke imibono emihle ize kumuntu othile, yeza kimi phakathi kobusuku futhi ngazibuza nje ukuthi ngigibele kanjani ngebhayisikili lami lomjaho? .
Ngoba ngihle phakathi kwe-aerodynamics yami futhi ngishesha futhi ngisebenzisa ubuchwepheshe ukushesha kakhulu ngangokunokwenzeka. Futhi ngivele ngacabanga ukuthi kusobala ukuthi akukho okuzokusho. I-Aerodynamics ayibambi iqhaza emjahweni womgwaqo futhi ikakhulukazi ingaphambili.
Ebhayisikili lami langaphambilini, nganginezibambo ezingama-42.40 centimeter, isethaphu emfushane ngoba nginayo eyodwa kimi, ngoba nginomzimba omude omuhle. Futhi lapho ngingena endaweni yokuthwebula umoya, amadolo ami ayesezindololwaneni zami, izindololwane zami zazisakazeka, futhi ngangingeyona i-aerodynamic ikakhulukazi.
Kuthiwani uma ngizama? Sukuma umzamo wetilosi. Ngingasebenzisa amandla amaningi ngendlela. Ngakho-ke ngacabanga, ngingazibeka kanjani izingalo zami phambi komzimba wami, kuleso sikhathi sesivivinyo sesikhathi futhi ngithole ijubane - yebo, ngoba sibona abantu abaningi belingisa lokho, uyazi ukuthi uyakubona lapho ubona iTour de France noma okuthize, abantu balengise izandla zabo ngaphambili.
Futhi kunoma ngubani ozame lokhu ekhaya, mhlawumbe bayazi ukuthi akusikho okwedlulele, akuyona ephephe kunazo zonke - - Akuzinzile kakhulu - ukudlala ngapha nangapha- Yebo, ngicabange ukuthi ngingenza kanjani into efanayo, ukulawula umoya, kodwa ukulawula ibhayisikili kangcono, ukufinyelela kwamagiya ami, ukufinyelela amabhuleki ami lapho kufanele. - Cishe indlela esafika ngayo lapho.
Yebo, ngokusobala besike saba nengxoxo ngaphambi kokuba ngize lapha namuhla, futhi ngiyazi ukuthi unezinto ezithile ezenziwayo ngalezi zinsimbi engizithandayo. Kodwa khuluma nje nathi futhi lokhu sekuhleliwe. Unani? - Yebo, izibambo zinemigoqo emincane kakhulu.
Lawa ngamasentimitha angama-25 ububanzi kumaconsi. Kodwa-ke, ziyisicaba, ngakho-ke cishe kububanzi obungu-38.40 bar emaconsi.
Ngakho-ke ulawula ngaphansi kwe-kickstand, noma uma ugijima, kepha uma ungaphezulu, lapho ukhuphuka noma uthola i-aerodynamic, awudingi lobo bubanzi ngoba awudonsi imigoqo, awuyena futhi uma unenye yezingcweti ezihamba phambili emhlabeni uzobona izandla zakhe zithintana noma kunjalo, ngakho-ke akungeni mehluko uma kuziwa ekulawuleni ibhayisikili. Futhi izibambo zibheka kancane ngakho-ke sinokugqagqana okuncane ngeziqongo zezibambo ezenzelwe i-aeroprofiled, okuncane okugoqwayo kanye nohlobo oluthile lwetheyiphu yesibambo esongelwe kabili nayi, icishe ifane nejel, icishe ifane ukuphumula kwesihlakala kwekhibhodi noma i-mac. - Yebo, ngakho-ke ngenze ama-gel pads ami ukuze ngihambe ngaphansi. - Hewu. (ehleka) Kufana nanoma iyiphi enye (ingxoxo egqagqene) - ungafinyelela ikhefu lakho kulesi sikhundla lapha.
Kepha indawo esebenza kahle kakhulu emoyeni futhi enethezekile ukuthi ubambelele kuma-levers lapha, futhi ungakwazi, ngoba ngine-eTap yami lapha, ngisengakwazi ukushintsha ngeminwe yami emincane - kuhle leyo nto, ngicabanga ukuthi uma sibona bafana, njengoba ngishilo ekuqaleni, emijahweni yeWorld Tour. Lapho banezandla kumane nje kungalawuleki. Uyamazi, kuhle, kuhamba impela, angithi - Ukulawula okuncane, unezandla lapha, okuthiwa zenzelwa umgodi omkhulu noma yini ongayenza.
Kunzima impela ukubamba leso sikhundla nezingalo zakho endaweni efanele. Futhi ungabona futhi ukuthi izingalo zabo zeluliwe ngakho-ke kungahle kungabi njenge-aerodynamic njengokuthola isikhundla esikhethiwe esikhethiwe. Uma ufika lapha, ungakhululeka amahlombe akho, unqikize amahlombe akho, futhi ube mncane impela ngaphambili, bese kuthi leyo milayo inhlobisa kanjani? Ngoba zibukeka, uyazi, zibukeka zide impela. - Nokho, lokhu, isigxobo esivamile sasingaba ngamasentimitha angaba yisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili.
Ukufinyelela kwale bar kungamasentimitha ayishumi nesithupha nanhlanu, ayishumi nesithupha, ngombono wami. Ngakho-ke, ukungena ngaphakathi kwemikhawulo yemithetho ye-UCI awukwazi ukuba ngaphezu kwamasentimitha ama-5 ngaphambi kwehabhu langaphambili. Engikwenzayo lapho ukuthi ngikuhlanganisa lokho nesiqu esifushane impela.
Ngithole nokuthi uma ngifaka isiqu eside kuyo futhi nginaleyo migqa emide yokufinyelela lapho ibhayisikili lakho lizizwa lixaka ngokuzama ukuphuma esihlalweni. Ngakho-ke ngithole ukuthi isici sokulawula simayelana nokuthi kude kangakanani nezandla zakho phambi kwesondo langaphambili kunobubanzi uqobo. - Yebo, futhi kanjani? Isikhathi eside lapho, ngiqonde ukuthi, uma ukhuphuka ama-hood, uzizwa kanjani? Ingabe kancane, ukudikiza okuncane? - Ah, cha, hhayi - Ngoba emehlweni ami kungenxa yendlela abancane ngayo. - Ah, cha, ayishwibi nakancane.
Ukukhuphuka esihlalweni kulungile impela. ISaddle nakanjani, izwakala ihlukile kancane ngoba izibambo zincane. Udinga ukusebenzisa amandla amaningi ukushwibeka ibhayisikili lakho ukusuka kolunye uhlangothi.
Futhi uzizwa unjalo lapho ekupheleni komjaho ukhathele futhi uzama ukuphuma esihlalweni. Kodwa-ke, ngithole ukuthi ungakuphika lokho ngokukhuphuka kumaconsi ngoba amaconsi abanzi. - Bengikuthanda ukubuka (inkhulumomphendvulwano egqagqene) Yebo, yebo, noRick omdala bakhuphuka amathonsi.
Kukhona okuthile okupholile ngalokho. Kepha futhi kunzima. (ehleka) Kodwa unayo, ngakho-ke lapho unesiqu esingu-70 mil, kodwa kwenye ibhayisikili lakho lapho onalo, ingabe i-flareon ehluke kancane emaconsi, akunjalo? - Ah cha (inkhulumomphendvulwano egqagqene) Hhayi-ke, lezi zibambo zisabalele kakhulu ngakho-ke lokhu kweqise kancane - Kwesokudla - Ngakho-ke leli ibhayisikili engilisebenzise emijahweni yomgwaqo nasezinkingeni izikhathi ezimbalwa zokugcina.
Lawa ngamasentimitha amathathu ububanzi lapha, ngakho-ke angamashumi amabili nesishiyagalombili - angamashumi amabili nesishiyagalombili! Iqinile impela! - Lokhu kubanzi, lokhu kubanzi (inkhulumomphendvulwano egqagqene) - Engicabanga ukuthi ngineminyaka engamashumi amane nambili manje yize izwa- Ngigembula izwakala njengeloli- Izwakala njengeloli, izwakala iyinqaba ngempela. Kepha noma ngubani onqamula ebhayisekilini ukusabela kokuqala, woo, akuzwa ukuthi kuyamangaza lokho. - Ngempela? - Yebo, ubandlululo ukuthi awukwazi ukukhumbula ukuphatha ibhayisikili lakho, futhi yindlela abazizwa beqinile ngayo.
Kepha empeleni kuzwakala kuyinto enhle ngokwemvelo - yebo, ngoba kimi, lapho ngishayela kakhulu, angishayeli njalo ku-hood. Ngikuthola kulula kakhulu ukuvele ngivule ikona. kahle nje - yebo, uyakwazi ukushayela, futhi lokho bekuzolingana ne - Bengihlala ngibheka amakhefu ami, bese ngivele ngiwafune - yebo (izingxoxo ezigqagqene) ngiyaqiniseka ukuthi ungazenza ngamabhuleki esethelayithi Iphutha.
Kepha yebo, ngakho-ke ubungashayela kanjalo. Ngokusobala awukwazi ukufinyelela amabhuleki noma amagiya. Ungabeka izikezi zokushintsha kwesathelayithi lapha, empeleni ikunikeze isikhundla esiqonde kakhulu, esiqonde kakhulu, kufana nesimo sebhayisikili somgwaqo olondolozayo.
Ngidlulele ngokweqile, ngaphakathi kwemithetho isikhathi eside ngangokunokwenzeka futhi ngenxa yokuthi ngifuna ukuzelula futhi ngibe namandla ashubisa amandla ngangokunokwenzeka - ungabona ukuthi angisagijimi ngoba bengicabanga ukuthi ngiyinduduzo nakho konke lokho ngenkathi unjalo nje, cha. Ngifuna ukwenza konke engingakwenza ukuze ngiduduze. - Ngakho-ke, nginesiqu sebanga elibi lapha, ukuze ngiphikise iqiniso lokuthi ngangihamba ngohlaka lwamasentimitha angamashumi ayisihlanu nesishiyagalolunye, usayizi omkhulu kakhulu wohlaka olungakhona ebhayisikili laseMoriarty. - Kulungile! Futhi yini isizathu esenza ukuthi ukhethe amashumi amahlanu-- yebo, ngakho-ke inkinga ngamashumi amahlanu nesishiyagalolunye, ukuze nje ngikwazi ukuhamba isikhathi eside ngokwanele, ngoba ngicabanga ukuthi uma benginamashumi amahlanu nane, amashumi amahlanu nesithupha, ungacabanga ukuthi bengingaba Lapho? uma-ngangikulesi simo ngabe ngixhumana, idolo lami lalizothinta indololwane yami njengoba kwakusebhayisikili lami lomgwaqo langaphambili elinezibambo ezijwayelekile, yingakho ubona abantu kuma-hood, banamadolo ngaphakathi kwezindololwane zabo, ezivalekile ngaphakathi kwezindololwane zabo nezingalo zabo ezinwetshiwe, okwandisa indawo yabo yangaphambili futhi kubenze bahambe kancane.- I-Brilliant.
Uyazi yini? Ngibheke phambili ekuboneni ukuthi ufike kanjani kulokhu kusuka kumbhangqwana ojwayelekile. Futhi ngifuna ukwazi okwengeziwe ngalezi zinkulungwane ezingama-155 mil. - Ngakho-ke awuyona indawo ejwayelekile emjahweni womgwaqo emhlabeni wonke nase-UK.
Kunobunye ubufakazi bendatshana bokuthi isikhundla esinolaka ngaphandle kokukhwabanisa kuvula i-angle yakho ye-hip futhi ngokuyisisekelo ibeka imisipha yakho ebangeni layo lokunyakaza elisebenza kangcono, okuvumela ukuthi ulahlekelwe amandla amancane njengoba ujula. Futhi ngikwazile ukwenza ucwaningo oluthile futhi sithole ukuthi banikeza amandla amaningi ngezikhwama ezimfushane kuzo zonke izifundo nezikhundla zesivivinyo sesikhathi esinolaka. Ulahlekelwa amandla amaningi uma kuqhathaniswa nesikhundla esiqondile esilahlekelwa amandla amaningi kuma-cranks amade futhi ngithola ukuthi abanye abantu bawagcine noma balahlekelwe yilowo mandla kancane ngezikhonkwane ezimfushane lapho besesivivinyweni sesikhathi.
Ngakho-ke ngikwedlulisile lokho ngoba empeleni ngilapho uthola i-aerodynamic kunesimo sesivivinyo sesikhathi ngakho awufuni ukuyekethiswa ngokuzicisha? I-hip angle.- Engikuthola kujabulisa ukuthi sekuphele iminyaka engaphezu kwengu-20 abantu abafana no-Indurain, Romingood, abafana abanje benze irekhodi labo - yebo, bahamba ngemikhonto engamashumi ayisishiyagalombili ngoba bekunguwe, bekulula ukucabanga okunephutha ukuthi bafuna ama-cranks ukuthola amandla kepha akusikho okudingayo, leyo yingalo ye-1 lever ebhayisikili. Uma ufuna amandla amaningi, vele ushintshele kugiya elula.
Futhi ujikeleze i-cadence ephakeme. - Kulungile, futhi uma ubheka amasondo akho namathayi akho, kusabonakala kumangalisa kimi ukuthi imijaho eminingi yemigwaqo iqhubeka ikhula futhi ibanzi futhi yilokho okungamashumi amabili nesishiyagalombili, amashumi amathathu, into enjalo? Ngiqonde ukuthi, siqala ukubona amashumi amabili nesishiyagalombili lapha nalaphaya, kepha iningi labashayeli lisabambeke kumashumi amabili nanhlanu - Yebo, ngakho-ke amathayi angama-28 mil ububanzi weConti Tuber, kepha onqenqemeni olubanzi lwe-30 mil olubanzi kakhulu unyathela oluyisicaba lwethayi luyenza ibanzi. Imane izame ukungayekethisi i-aerodynamics ngakho-ke sinokushintsha okuhle, okubushelelezi phakathi kohlangothi lwethayi nohlangothi. - Kulungile, sihlale phansi manje futhi sizobheka ukwakhiwa kwalezi zibambo obukade uzibandakanya nazo ekuklanyweni nasekwakhiweni kwazo.
Kepha ngiqonde ukuthi, ngombono nje omncane, nayi ipheya noma izibambo ezijwayelekile. Futhi ngemuva kokudlala ngokuzungeza ngemigoqo kaDavid, lokho kuzwakala kungajwayelekile, kepha ngokuthembeka, yilokho kanye okusanda kwenzeka. Lezi zizizwa zikhulu, akunjalo, zizizwa zibanzi kakhulu.
Awu, ngiqagele, amashumi amane nambili kunjalo? - Amashumi amane nambili.- Sinenduku ejwayelekile engamashumi amane nesibili, uhlobo lwethonsi oluyisicaba, lezi zinkuni ezihlangene. Kepha manje sesinakho, kahle, yonke imiklamo ehlukile.
Ngakho-ke ngikhulume nami ngisacabanga, zinkulu, kodwa azinjalo. - Yebo, intuthuko, yebo. Ngakho-ke le migoqo yimigoqo yeNitto Rondinaire.
Lokhu kwenziwa yinkampani yaseJapan. Le yimigoqo efanayo uJan-Wilhelm van Schip agibele ngayo futhi yabangela impikiswano eMqhudelwaneni Womhlaba ngoba izigaxa zayo zibheke ngaphakathi futhi zinciphile ngokweqile. Um, ngaqala ukudlala ngayo.
Empeleni lokhu kungukugcwalisa umzimba ebengifuna ukukuthola ukuthi ngabe bekuyizimbambo zekhabhoni ezinesiphetho esihle se-aeroprofiled ngalokho ongazizwa unjalo. Basebenza, kepha hhayi ngokugqamile ngoba kulapho ubambe khona isigwedlo. Empeleni, ngithole ukuthi ungathola i-aerodynamic enhle, kepha wafaka ingcindezi enkulu ezihlakaleni zakho futhi waba nenkinga efanayo ukuthi ama-triceps akho angakhathala futhi bekungeke kube ntofontofo.
Futhi yingakho ngithole ukuthi ngidinga ukufinyelela kuzimele ngohambo olude ukuze ngibe mude ngokwanele ukuze ngithole isikhundla engisidingayo ngaphakathi kwemithetho ye-UCI. Ngakho-ke ithubhu ephezulu kufanele ibe yinde kunokuba nje ibe nesiqu eside impela ngoba ngeke ivunyelwe futhi izwakale - ayizizwa kanjalo, ngakho-ke ngixhumane nenkampani eguqa ngeshubhu. Ngabadweba umdwebo omncane ngathi, ngifuna ukugoba lapha, ngiyakufuna, uyazi, mangaki ama-intshi.
Futhi, ah, kuhambe kahle impela. Kepha njengoba uzizwa, kusinda impela. - Yebo, kusinda impela. - Zingama-gramu angama-500 engicabanga.
Futhi zinjalo, empeleni ziqinile. Kodwa-ke, bekufanele ngize nama-shims ami ukuze ngiwalinganise kahle isiqu esivamile ngoba a - akayona i-coke yakho ejwayelekile, uyazi - cha, yebo, impela, yebo. Amathini ambalwa kakhola.
Futhi-ke ubenenkinga ngezibopho ze-lever. - Impela. - Empeleni yayimincane kakhulu kunalokho, endaweni yokubambezela kwesigwedlo, ngakho-ke kwadingeka, kwakufanele ngibeke itheyiphu ngaphansi, njengoba ubona. - Sikude, kahle, yini leyo? Lokho ngamashumi amathathu nambili, akunjalo? - Ngicabanga ukuthi sidinga ukuphuma esikalini.
Kepha azinciphile kakhulu, cha, zinciphe kakhulu. Kepha mncane kancane, kepha bayakuvumela ukuthi ubambe futhi ukuthola lokho kusekelwa ukuze ukwazi ukubamba isikhundla se-aerodynamic. Futhi-ke lokhu kuyinto efanayo, imigoqo efanayo, ne-washer endaweni (mumble) bese kuba isiqu. - Kuyamangalisa. - Ngakho-ke bengikugibela cishe bonke ubusika ebhayisikili lami lobhuqu ebelizulazula . - Ngabe ubuye wayishayela emgwaqeni? - ngenzile, yebo! - Yebo? - Kusebenzile, kwasebenza.
Ngisanda kumiswa ngaphakathi futhi nginezibambo zami nokuthi zinde futhi ziyagoba - (ehleka) angikaze ngicabange kanjalo - bese kuba nesigaba esiphakathi ebesisesibhayisikili sami samanje samatshe, ukuthi Ngokuyinhloko lezi zibambo ezenziwe inkampani eTaiwan ebizwa ngeFeris abaxhasi bayo bavuleleke kakhulu emibonweni enjalo, kuhle kakhulu kimi. Bangenze Ngenziwa Amanye ama-handlebars ngokuyisisekelo kwakuyilo mklamo, kepha ngobukhulu obujwayelekile, ubungaphezulu, ingalo ezungeze amamilimitha ayi-8 nendawo yokubopha futhi impela ilula kancane. Ngakho-ke ngizamile lezo futhi zasebenza kahle impela, ngaba nazo izinhlanga ezimbalwa zasemgwaqweni, ngicabanga ukuthi ngizama ukuthola ukuthi ngingawuthuthukisa kanjani umklamo, futhi ngithole ukuthi kufanele ugobise ama-lever kancane ukufaka izingalo zakho .
Ngakho-ke bengicabanga ukuthi mhlawumbe isizukulwane esilandelayo sizosebenza - Vele kufanele ubambe lokhu ukuze ukwazi ukukubona - Yebo.
Ngakho-ke isizukulwane esilandelayo empeleni, sincane futhi. Lokho ngamasentimitha ayisishiyagalombili kuma-hood. Ngakho-ke, nganginezinhlobo ezimbili - eyodwa ngamasentimitha ayisishiyagalombili nesishiyagalombili.
Ngakho-ke, amashumi amabili nanhlanu abesohlwini lwesikhathi sesivivinyo. Ukuze ngibe nokulinganisela okuhle, empeleni ngingakushayisa ngesihlalo, ngikhuphuke igquma esihlabathini esinezigqoko, futhi kuzwakala kukuhle. Kepha ingamashumi amabili nanhlanu, ibukeka kancane - amasentimitha ayisikhombisa anciphile, yileyondlela engangigibela ngayo. - Yebo. - Ngicabanga ngapha nangapha. - Ngenkathi amashumi amabili nesishiyagalombili ezizwa emuhle.
Ngakho-ke, le engeli yangaphakathi nomcabango ongemuva kwayo ukuthi ngingahle ngibeke izigaxa ziqonde ngqo, futhi kunginikeza ukufinyelela okuthe xaxa. Kepha uzothola kulula ukuthola lokhu kugqama ngezihloko zama-joists. Futhi ngidale imigoqo evuthayo ukuze ukwazi ukulawula amaconsi.
Ngakho-ke uma uzibuka empeleni, zizoba cishe nobubanzi obufanayo nobokuthi, ngisho okuncane, ukuncipha kancane - Ukuncipha kancane. - Ububanzi obufanayo nobamabili angamashumi amathathu nesishiyagalombili. - Yini abaningi - Kubanzi kakhulu. - Yebo, empeleni zibanzi .-- Kubanzi impela kunamashumi amathathu nesishiyagalombili namaconsi.
Ngakho-ke awunayo inkinga yokuphrinta, uyazi ukuthi akuyona, akuyona i-noodle, noma iqine ngempela, emaconsi lapho wehla noma uphuma konke ngokwemvelo - dala, ngiqonde, kulungile, kahle, kufanele ngibuze Umbuzo. Ukuhamba ngebhayisikili kungokwesiko. Uyazi uma ngibheka lokhu futhi uyazi ukuthi kukhona ukuxhumana kweScotland, engicabanga ukuthi nguGraeme Obree omaziyo nomunye umfana owabheka izinto zakhe esemusha wamangala kepha kwaba khona ukuhlukumezeka okunjalo, okuvela emphakathini, kusukela I-Federation, nazo zonke izinhlobo zezindlela.
Uke wezwa okuthile - (ehleka) ngicabanga ukuthi ngabe ngiqamba amanga uma ngithi cha. Yize, yebo, ngicabanga ukuthi abantu abaningi abaluthandi ushintsho, abathandi lapho abantu benza izinto ngendlela ehlukile. Futhi ngoba nje kubukeka sengathi ibukeka ingabantu, uyazi, bathi, oh, lokho kubukeka kungenangqondo noma akubukeki kusesitayeleni.
Noma ngubani lesi silima esigibela ibhayisikili ngezibambo ezihlekisayo? Kepha ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi sidinga ukuba nomqondo ovulekile kakhudlwana futhi sicabange, kungani akwenze lokho? Kufanele kube nesizathu sakho. Futhi empeleni kungenxa yokuthi ngihlale phansi ngacabanga ukuthi ngenza kanjani ukuthi ngisheshe. Akungenxa yokuthi kufanele ngibukeke ngiyisilima. (ehleka) - Kubukeka kwehluke kancanyana, kepha ngicabanga ukuthi uma ngikuleso sikhundla sebanga, ngiphethe ama-levers futhi ngixhuma, kubukeka buhle impela, bubukeka buhle impela.
Kubukeka njengesikhundla sesilingo sesikhathi. Kubukeka kwehluke kakhulu lapho ukhuphuka futhi izandla zakho zisondelene impela, kuyavunywa. Kepha yebo, ngakho-ke ngibonile ukuhlaselwa komphakathi.
Ngibe nabagibeli beWorld Tour kuTwitter - abafana abanomqondo abangivikelayo. Abafana abambalwa abavela kubhayisikili leHublot ekusethweni kweRibble abacabanga nge-aerodynamics futhi. - (ingxoxo egqagqene) - Babenjalo, yebo, kwakungabo, bangivikela.
Futhi-ke abafana abanjengoMichael Hutchinson noRob Hales, abaziwa ngokusobala ukuthi bangongqondongqondo kulo mdlalo futhi basebenzise i-aerodynamics ngezinhloso zabo. Nangempela bangivikela esidlangalaleni. Yini elandelayo? Kukhona noma cha? - Angiqiniseki, nginomsebenzi omkhulu engingabuyela kuwo ngakho-ke ngisaqala ukuqeqeshwa njengoG lapha eMid Wales ngakho-ke sathuthela lapha sisuka eGlasgow.
Ngineminye imibono embalwa. Ngicabanga ukuthi lokhu kufanele kusebenze. Ngokufanelekile bazobakhipha kukhabhoni, babe nephrofayili enhle eyisicaba, futhi mhlawumbe idizayini idinga ukuguqulwa kancane ukuze ungabi nankinga yokuxhumana.
Ngesinye sezibonelo zami zangaphambili, ngangingenankinga nhlobo. Kepha njengoba ngithole ukuthi uma ngishayela uma nginamaconsi ngishayela ngaleyo ngalo igobile kancane futhi bekungeyona inkinga kimi, uvele ubone sengathi bekuyintandokazi yomuntu siqu. Nginezinto ezimbalwa ngoMeyi futhi senginazo, ngenze ucwaningo lwangempela.
Ngalokho, ngizoba nentshisekelo yokuzama isikhundla se-metatarsal cleat esivivinyweni sesikhathi ngoba ngombono kungaba nenzuzo yamandla nenzuzo lapho ukhathala, uyakhathala, imisipha yethole ikhathala kancane, futhi ungadlulisa amandla ngebhayisikili endaweni yesivivinyo sesikhathi esingahle singabi khona emjahweni womgwaqo. Kepha ngesivivinyo sesikhashana, ngicabanga ukuthi i-cleat maphakathi nonyawo ingaba yinzuzo. Lokho kungaba yinto engizozama ngayo. - Inkinga encane yokugqagqana kozwane nakho konke - Yebo, yebo, ngakho-ke ebhayisikili lomgwaqo kuzoba nokugqagqana kwamazwane ngicabanga ukuthi ngaphandle kokuthi kungenzeka ukuthi usebenzisa ama-crank ayi-120 (uyahleka) - (uyahleka) Manje ake sixoxe! Kukhona i- Ake sibheke ezinye zezinqola ze-aero ongase ukwazi ukuzenza nasekhaya.
Ngazise ukuthi ucabangani ngabo ezansi esigabeni sokuphawula ngezansi. Ngizimisele kakhulu ukuthola. Futhi njengenjwayelo, gcina lokho engqondweni ukuthanda nokuhlanganyela lesi sihloko nabangane bakho.
Kwezinye izindatshana ezimbili ezinhle kakhulu, kuthiwani ngokuchofoza lever brake nalena enye.
Kungani abagibeli bamabhayisikili begibela i-peloton?
Emjahweni webhayisikili lomgwaqo, i-iqembu(kusuka ngesiFulentshi, ekuqaleni okusho ukuthi 'iqembu') yiqembu eliyinhloko noma iphakethe le-abagibeli.Abagibelieqenjini longa amandla ngoukugibelavala (ukubhala phansi noma ukushibilika) ukuya (ikakhulukazi ngemuva) kokunyeabagibeli.
Into eshesha kakhulu engafinyelelwa iqembu labagibeli bamabhayisikili ukugibela kulayini wejubane. Kuyindlela engcono kakhulu yokuhlanganisa imizamo yakho yokusika umoya ngokushesha okukhulu. - Manje ungahle ungayibizi ngeBit, futhi uBitor angayibiza ngeqembu lezigelekeqe.
Kepha noma yini, imigomo ihlala ifana. Le yindlela oshayela ngayo ngokushesha okukhulu. (I-Dramatic Music) - Ukugibela kulayini wejubane ufuna ukuba semigwaqweni eyisicaba noma enamagquma lapho ijubane liphezulu futhi uzodinga okungenani abane bakho, kepha kulapho okungcono kakhulu! (umculo onamahloni) - Umqondo we-paceline ukuthi uchitha isikhathi esifushane phambi kweqembu uvunguza emoyeni bese ubheka emuva lapho ukhosele khona ngenkathi ulinde ithuba lakho lokuthi libuye.
Lokhu kusho ukuthi uma uphambili ungashayela kakhulu kunokwedwa ngoba uyazi ukuthi ngemuva kwalokho uzoba nesikhathi sokuphumula futhi lapho abashayeli sebebaningi, uyothola ukuphumula okuningi. (Umculo we-Upbeat) - Kunezinhlobo ezimbili eziyisisekelo zemigqa yejubane. Umugqa owodwa wejubane ulayini owodwa wabagibeli.
Sisebenzisa amasekhondi ayi-10-20 ngaphambili ngaphambi kokuba siwele, sinciphise izingxenyana, bese sibuyela emuva lapho uthatha khona indawo yakho futhi - futhi leyo yindlela esheshayo yokuyithola. Uma ubuka isilingo sesikhathi seqembu emjahweni, bazokwenza lokhu. Futhi kusebenza kahle ngoba uchitha isikhathi esincane ushintsha abashayeli okukuthola kukuhle.
Empeleni ucezu oludinga kakhulu. Kuhle futhi ngoba unamakhono ahlukile eqenjini lakho anganxephezela kalula. Lokhu kuvumela abagibeli abanamandla ukuthi bashintshe isikhathi eside ngaphambili.
Abashayeli ababuthakathaka bangenza okufishane. (umculo ojabulisayo) - Uma ugibela umqansa futhi ngaphambili kungaba umqondo omuhle ukwehla kancane. Lokhu kufanele kubhekwe ukuthi ngenkathi abagibeli abasemuva kwakho besavikelekile emoyeni, kufanele basebenze kanzima benyuka umqansa ukuze bangakutholi ukuphumula okujwayelekile.
Uma sekuyithuba lakho ngaphambili, kufanele ube ngabagibeli ngaphandle kokuthi Awufuni ukwenza okuningi kakhulu kunesabelo sakho esifanele, futhi ngokuqinisekile awufuni ukuya kanzima kakhulu futhi uwele ogibeni bese ungakwazi suka endleleni bese uyolahlwa, kuhle kuwe, yebo kodwa-ke akulungile nakulo lonke iqembu. Kukhona ngisho nomshayeli obuthakathaka ongalulami kahle kubo bonke abanye abantu, kepha ukulahlekelwa ngumshayeli wakho oqinile kodwa oshisekela ngokweqile kuzoba ukushaya kwesando ushiye kancane ethangini ukuze ukwazi ukuya phezulu kulayini. Lapho uqeqesha izivivinyo zesikhathi seqembu, izinzuzo zihlala zigcizelela ukuthi ukuzikhandla kwakho kuphelile uma usubuyile ngokuphepha kulayini wejubane. (Joy Music) Ngemuva kwalokho unolayini ophindwe kabili, oqanjwe kanjalo ngoba unezintambo ezimbili zabashayeli, umugqa oshesha uye phambili bese ulayini ohamba kancane ubuyela emuva maqondana nolayini osheshayo.
Isikhathi sakho ngaphambili siside nje ngokwanele ukuthi usuke kulayini osheshayo uye kulayini ohamba kancane ngaphambi kokubuyela emuva emuva futhi. (Joy music) Ungaqiniseka ukuthi uzothethiswa lapho uvuvukala, kepha ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi kunzima ukungathatheki ngabaphambili. Ngakho-ke icebo elihle lokugcina iso lesigamu ijubane lakho ukuze ungasheshisi lapho ufika lapho uya khona.
Ngokuzijwayeza ukwenza kancane, ungakwenza lokhu ngisho nasendaweni enamagquma - ngokushesha nje lapho ususukile emotweni engaphambili, ungaqala ukuwela ngaphesheya. Lapho ugcina izinto ziqinile, lapho wonke umuntu ezoba nokuvikelwa okuningi, uzothola ngokushesha okukhulu. Kepha akudingekile ukuthi ushaye izibambo zoshade naye ngenkathi ushayela imbongolo yakho, noma ngabe unayo enkulu.
Futhi-ke kumane kuyindaba yokuyekethisa ngokuvamile ngoba, njengoba ubona, akudingeki ulinde isikhathi eside ukuze indawo yakho yokukhosela ifike. Uma nje ungazange ubhukude ngaphambili. Akukho ukucasula! (umculo omnandi) - Uma usuphelile ulayini futhi uhambahamba, kungaba umqondo omuhle ukutshela umshayeli olandelayo ukuthi ugcine ukugcina ukuze bazi ukuthi badinga ukusheshisa.
Manje eqenjini eliqeqeshwe kahle - Phezulu! kuyadingeka, kepha akubizi lutho futhi kungasiza iqembu ukuthi lihambe kahle futhi ngokushelelayo. Phezulu! - Ukuqala okulula empeleni kuyikho konke okudingekayo. Ukwazisa umgibeli wokugcina ukuthi ukuphela kweqembu kuyasondela, phezulu, futhi angakwazi ukusheshisa futhi abuyele ngaphakathi. (Umculo ojabulisayo) - Uma umshayeli wokugcina engashintsheli kolunye ulayini, konke kuzokonakala.
Ulayini uyakhulula bese ufika ngaphambili. Manje lokhu kungenzeka emijahweni lapho abashayeli bezama futhi ngokunyenya bacashe futhi bonge amandla abo. Kunezindlela zokubhekana nokunyonyobela, kepha esikhathini esifushane umshayeli kufanele enze ijika elengeziwe endaweni yesibili futhi asheshise ukudlula umshayeli ukuze akwazi ukumqala kahle ukuze akwazi ukumqala kabusha iPace Line futhi.
Kungonakala futhi uma umshayeli ovela kulayini osheshayo ehlala ngaphambili isikhathi eside kakhulu futhi engangeni kulayini ohamba kancane sekwephuze kakhulu. Manje umshayeli obedlula ngaphambili nje, manje osehlisa ijubane, uhlala ebhajwe emoyeni isikhathi eside kakhulu kunalokho abebekulindele, futhi kudala igebe kulayini ohamba kancane phakathi kwabo nomshayeli wokubukisa ogcina ufike sekwedlule isikhathi. Lokhu kungazwakala njengokuningi manje, kepha umzamo owengeziwe walo mgibeli odwetshiwe ungenza umehluko omkhulu, ikakhulukazi lapho egibela umkhawulo - empeleni, kungaba yindlela ecashile yokuthola abanye abagibeli ekuqhekekeni kwesondo lomjaho lapho unethuba elingcono lokushaya bonke ekugcineni.
Ngakho-ke, kunezikhombisi nezeluleko ezimbalwa zokwenza iqembu lishayele futhi ligijime ngokushesha wena nalabo ogijima nabo, kungaba ngabangane noma izimbangi. Vele ukhumbule lo mthetho wegolide, zama ukugcina okuthile kubekiwe ukuze uqiniseke ukuthi awulahli. Ngisho nabagibeli abanamandla kakhulu bangama lapho bezama ukwenzela iqembu okuningi kakhulu.
Yini inhloso yokwehlukana?
TOPhumaikhebula ligcina i-trailer yakho ingabi ngumcibisholo uma isuka emotweni yakho yokudonsa. Uma iphini seliphumile futhi amabhuleki eseqalile ukusebenza, i-trailer kufanele yehlise ijubane bese ima. Lokhu kungayivimba ukuthi ingadluli emotweni yakho yokudonsa, isuke eweni noma idale ingozi kwabanye abashayeli emgwaqeni.
Kungani i-peloton ishesha kangaka?
Wonke umuntu uyazi ukuthi ukubhala phansi kusindisa amandla. Kepha ngokususelwa kwimibiko evela kubagibeli pro ukuthi awudingi ukuyihambisa enhliziyweni yeiqembu, iqembu lososayensi lalinombono wokuthi ukonga amandla ashubisa amandla asemkhunjiniokuningingaphezulu.
Yini i-peloton emjahweni webhayisikili?
Kalula nje, iqembu elikhulu labagibeli elihlanganiswe ndawonye ku-umjahoumzila.UPlatoonyigama lesiFulentshi elisho ibhola elincane. Indlela enhle yokulinganisa ukuthi impumelelo yomgibeli we-breakway ukuthola udumo ingabheka ibanga eliphakathi kwaboibhayisikilikanye ne-iqembu.
Ingabe abagibeli bamabhayisikili bangempela basebenzisa i-peloton?
Okuningi kuze kube seqophelweni, uzogibela kuUPlatoonIzikhathi ezingama-2-3 kaningi kunalokho ongake uye kusigaba se-spin. Le yikwangempelaisizathu somgwaqoabagibeli bamabhayisikiliukuzi bandakanyaUPlatoon. Okuwukuphela kwento ebuhlungu ukuthi kunabafundisi abambalwa bendawo yokuvula amandlaUPlatoon, ngakho-ke izinketho zomculo nezikhuthazo zikhawulelwe kancane.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kuhle ekunciphiseni isisindo?
Ukuhamba ngebhayisikilingobaUkwehla kwesisindo: 4 Amasu Aphumelelayo Okuzama.Ibhayisikiliukugibela kungukuzivocavoca okuhle kakhulu kwe-cardio. Kungasiza ukukhulisa impilo yakho yenhliziyo namaphaphu, kuthuthukise ukugeleza kwegazi lakho, kwakheke amandla emisipha, futhi kwehlise amazinga akho okuxineka. Ngaphezu kwalokho, kungakusiza nokuthi ushiseamafutha, isibani samakhalori, kanyeukuncipha emsimbeni.17. 2020.
Ingabe ukunyakaza okuhlukanisiwe kusemthethweni?
IngabeUkunyakaza Okuqhekekayoukuumkhonyovu?Ukunyakaza kokuhlukanaakuyona i-umkhonyovu, okungenani ngomqondo wobuchwepheshe. Lokhu kungenxa yokuthi banamathela ekuqeqeshweni 'kokumaketha abakhangayo' ukuze abantu bakwazi ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuthola abantu ku-Enagic futhi bathengise imishini yabo yokuhlunga amanzi ebiza kakhulu.
Ngabe iBreakAway Cycling yenzani ngokuphila?
I-Breakaway Cycling ingaphezu nje kweqembu. Siyinhlangano engenzi nzuzo esebenzisa imikhakha eminingi emihle ukushintsha izimpilo, ukukhulisa umphakathi, nokwakha ikusasa eliqhakazile ekugibeleni amabhayisikili kwentsha nabesifazane.
Kukuphi ukuhamba ngebhayisikili iBreakAway eDelaware, OH?
IBreakaway Cycling ingesinye sezitolo ezindala zamabhayisikili zaseCentral Ohio futhi itholakala emlandweni wedolobha iDelaware. Siyisitolo sesevisi esigcwele esithengisa amabhayisikili nezinye izinsiza futhi sihlinzeka wonke amabhayisikili. IBreakaway Cycling ingesinye sezitolo ezindala zamabhayisikili zaseCentral Ohio futhi itholakala emlandweni wedolobha iDelaware.
Yini okufanele ngiyenze eqenjini elihlubukayo?
Uma useqenjini elincane elihlubukayo futhi ijubane selizinze, hamba ngokuzungeza okushelelayo (okusho ukuthi abagibeli abahamba ngapha nangapha komoya), hhayi i-paceline. Ukuhamba nge-paceline kumayelana nokulawula kanye / noma ijubane.